Ndị na - eme obere akpa & Ndị na - eweta obere akpa - Fọọti obere akpa China
'Smụ nwoke na - eyi uwe ejiji na - acha odo odo
Ejiri ezigbo akpụkpọ anụ PU rụọ ọrụ na gburugburu ebe obibi. Litkpụrụ litchi siri ike dị nro, iku ume, nwere mmetụta dị mma, a ga-ejikwa akwa mmiri kpochaa ya.
Mpempe akwụkwọ mkpụmkpụ obere akpa magnetik
Ejiri ngwa PU dị elu, imepụta ikike dị ukwuu, ị nwere ike tinye foto, kaadị akụ, akwụkwọ akụ, akwụkwọ akụ, mgbanaka rụrụ arụ, wdg, zoo ọchịchịrị zoro ezo nwere ike itinye akwụkwọ ndenye dị mkpa, wdg, nchebe na ntụkwasị obi.
Ladies obere akpa nnukwu shei ụdị 2020 Korean ekwentị mkpanaaka akpa ejiji uwe mkpuchi
Ejiri obere akpa ike njigide a nwere ezigbo mma, ike na gburugburu ebe obibi PU. Ejiji ejiji, agba mara mma, ihe mkpuchi mmiri, mmiri na-egosi mmiri, nke na-adịgide adịgide, mmetụta dị mma nwere ike ịsacha ya na akwa mmiri.
Akpa uwe ụmụ nwoke nwere ogologo dị mkpụmkpụ akụkụ vetikal 3 na-emegharị oghere kaadị nwere nnukwu ikike ejiji obere obere akpa
akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ dị elu na gburugburu ebe obibi dị mma, ihe mkpuchi mmiri, mmiri na-egosi mmiri, iku ume, ịdị mfe na nkecha obere akpa, mmetụta dị mma, onyinye azụmahịa, ncheta njem, nhọrọ kachasị mma maka onyinye mmemme ụbọchị ọmụmụ.
Ladies obere akpa ogologo ngalaba nnukwu ike abụọ zipa ipigide obere akpa nwaanyị abụọ-oyi akwa ipigide akpa ejiji obere akpa
Ihe ejiri okpukpo abuo zighachiri uzo mee ihe di elu ma nwee ihe eji eme otutu ihe PU. Mpempe mmiri, mmiri na-egosipụta mmiri, nkecha, ọdịdị zuru oke, ọtụtụ agba, na-adịgide adịgide, mmetụta dị mma, nwere ike iji akwa mmiri kpochaa ya.
Ladmụ nwanyị ọhụrụ na-amachi akpa obere akpa
Emebere obere akpa a nwere ihe eji eme ihe PU eji eme ihe na onodu mara mma. Shapedị agba, ụdị agba agba agba agba, ihe ịchọ mma nke tassel, akwa mmiri, ihe mkpuchi mmiri, nke siri ike ma na-adịgide, ọdịdị zuru oke na-adị mma, a ga-eji akwa mmiri kpochaa ya.
'Smụ nwoke na obere akpa akwa zipa obere akpa na - azụ ahịa ekwentị
Ejiri akpụkpọ anụ PU na gburugburu ebe obibi mara mma. Ọ dị mma ma nwee akwa nhicha. Igwe mmiri, iku ume, dị nro, dịkwa mma, ịdị elu dị elu.
Akpa azụmaahịa akpa ọhụrụ juputara akpa
Jiri nlezianya họrọ akpụkpọ anụ PU nke nwere gburugburu ebe obibi dị elu. Mkpịsị aka dị nro, ọdịdị zuru oke, ma nwee ike iji akwa mmiri wee hichaa ya.
Menmụ nwoke na-ewu ewu ogologo oge
Ejiri ezigbo akpụkpọ anụ PU, ahụike na gburugburu ebe obibi. Qualitydị dị mma, akwa mmiri, iku ume, emetụ ahụ nke ọma, ma enwere ike iji akwa mmiri wee hichaa ya.
Akpa lutmụ nwoke na-acha uhie uhie na obere akpa akpa akwa
Ejiji ọmalịcha obere akpa kaadị ebe ana-acha uhie uhie dị ọhụrụ 3 na - anọghị n'oghere azụmahịa obere akpa
Nnukwu ikike nke obere akpa nwere ike ịnabata ihe niile dị mkpa. O nwere ebe 8 maka ichekwa kaadị kredit, nke nwere ike gboo mkpa azụmaahịa ụbọchị, njem na ịzụ ahịa.